အဖေလိုအစ်ကိုလို ချစ်ရတဲ့ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူရေမွန်ရဲ့ ညီမလေးရင်နဲ့မဆံ့အောင်နာကျင်စွာနဲ့ရေးသားလာတဲ့ ရေမွန်ရဲ့အကြောင်းလေး – Cele Snap
ဘပီ…. မိသားစုထဲမှာ သားအကြီးမောင်နမ ၂ယောက်လုံးက မွေးလာကတည်းက အတောင်တဖက်စီ ပဲ့လာသူအချင်းချင်းမို့ ကိုယ့်ခံစားချက်သူနားလည်သလို သူ့ခံစားချက်တိုင်းလဲနားလည်ပေးတယ် ငယ်ငယ်ကဆို အမေသီချင်းထွက်ဆိုတိုင်း မထိန်းတတ်ထိန်းတတ်နဲ့ နို့ဘူးတွေဖျော်အနှီးတွေလဲနဲ့ ထိန်းလာပေးတဲ့ အကို မိစုံဖစုံ နဲ့ကြီးပျင်းလာတာ မဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်မှာ အားကိုးစရာဆိုလို့ သူပဲရှိခဲ့တယ်အဖေလို အကိုလိုမျိူး ချစ်ရတဲ့သူ သံယောဇဉ်အရှိဆုံးသူပွဲလမ်းတွေ သွားချင်တဲ့အခါတိုင်း အမေ့ကိုခွင့်တောင်းပေးပီးအမြဲလိုက်ပို့ပေးတယ်အပြန်ကျရင်မေးတယ် “ပျော်လား ပြူးစိန် “တဲ့ငါ့ညမက အမြဲစိတ်ဓာတ်ကျတတ်လို့နင်ပျော်ဖို့အရေးကြီး တယ် ငါအားရင်လိုက်ပို့မယ်ဆိုပြီးပြောနေကျ
အမေနဲ့ရန်ဖြစ်တိုင်းလဲ ကားနဲ့လာလာခေါ်ထုတ်ပေးပီးစိတ်ပျော်အောင်ထားတယ် ဘာစားမလဲ ဘာလုပ်မလဲအကုန်နားလည်ပေးပီး နှစ်သိမ့်တတ်ဆုံးသူမို့အခုချိန်ပိုခံစားရတယ်Covid အချိန်ကတည်းက အိမ်ကစီးပွားရေအဆင်မပြေလို့သူပဲထောက်ပံ့ခဲ့တာ အိမ်လခ ဈေးဖိုးက အစသူ့ဘက်က ဘယ်လောက်အဆင်ပြေပြေ မပြေပြေကိုယ်တွေကို ထုတ်မပြောဘူးမရရအောင် ရှာဖွေပြီးလာပေးတတ်တဲ့သူ…Streamer လုပ်တုန်းကလဲ သူအရမ်းကြိုးစားတယ်နဂိုထဲက ဂိမ်းဆော့ရ ဝါသနာပါတဲ့သူမို့ သူနဲ့အဆင်ပြေတာပေါ့တခါတလေတော့လဲ အရမ်းညည်းတယ်ပင်ပန်းလိုက်တာတဲ့…ပျင်းလို့ဆော့တာမျိုးမဟုတ်ပဲ အလုပ်တခု အနေနဲ့လုပ်ရတော့ညလဲမအိပ်ဖြစ် မျက်ရိုးတွေကိုက်နဲ့ အရမ်းပင်ပန်းရှာတယ်သနားလွန်းလို့ ဘပီရယ် အဲ့လောက်ကြီး အလုပ်တွေဖိမလုပ်ပါနဲ့နားပါဦးဆိုလဲ “အလုပ်လုပ်မှ ပိုက်ဆံရမှာ ကြိုးစားရမယ် “တဲ့အသက် 40 ပြည့်ရင် ဘုန်းကြီးဝတ်မယ်ဆိုပဲငါဘုန်းကြီးဝတ်သွားရင် ငါရှာထားသမျှအကုန်လုံးက နင်တို့အတွက်ပဲဆိုပီးပြောနေကြလူကြီးသူ့အနွံတာ သူအနိုင်ကျင့်သမျှ အခံဆုံးကလဲ ကိုယ်ပဲရန်ဖြစ်တိုင်းလဲ သူအဆဲဆုံးပဲ သူပြောနေကျစကား “ငါကအကြီး ငါ့ကိုဆရာလာမလုပ်နဲ့ ” x)အမြဲတမ်း ရန်ဖြစ်ပြီးတိုင်း ပန်းစည်းကြီးယူလာပီးပါးကိုလာနမ်းတယ် စိတ်မဆိုးနဲ့တော့ ပြူးစိန် ဆိုပီးအပြင်ထွက်ခါနီးတိုင်းလဲ အမေနဲ့ညမကို နမ်းပီးမှသွားတတ်တဲ့သူမျိုးတနေ့ကို ဖုန်းတခေါက်ပုံမှန်မပြောဖြစ်ဘူးအမြဲ ချစ်တယ် ဆိုပြီး တဖွဖွမပြောဘူး ဒါပေမယ့် သူအရမ်းချစ်တယ် ဆိုတာသိတယ်
ဘပီရေ…. ဘပီကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးတွေ မီးမီးချက်ကျွေးချင်သေးတယ် ဘပီ အဝတ်တွေလဲ လျော်ပေးချင်သေးတယ် ဘပီ စိတ်ဆိုးလို့ အော်ဆဲတဲ့ အသံလေးလဲကြားချင်သေးတယ် ဘပီ နေမကောင်းတဲ့အခါတိုင်း ပြုစုပေးချင်သေးတယ် ဒီခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ ကာလကြီး ပြီးသွားရင် မိသားစုကို ဗုဒ္ဓဂါယာဘုရားဖူး လိုက်ပို့မယ်ဆို? အခုဖြစ်နေတာတွေအားလုံးက တကယ်မဟုတ်ရင် သိပ်ကောင်းမယ်ဘပီချစ်တဲ့ ပြူးစိန်က ဘပီလောက် မသန်မာဘူး မရင့်ကျက်သေးဘူး ဘပီရေ ဘပီမရှိတဲ့နောက် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာလဲ မတွေးတတ်တော့ဘူးေ နရာချင်းလဲပေးလို့ ရရင်သိပ်ကောင်းမယ် ဒီအချိန်မှာ အရာအားလုံးက ကိုယ့်တာဝန်ကျလာပီဆိုတော့ အမေ့အတွက် ပိုပိုးလေးအတွက် ကြိုးစားပြီးတော့အသက်ဆက်ရှင်ရဦးမယ်ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုခွန်အားမျိုးနဲ့ ဆက်ရပ်တည်ရမလဲဆိုတာ မသိဘူး(ဘပီသိပ်ကြိုက်တဲ့ အုန်းထမင်းနဲ့ကြက်သား)အခုချိန်ဆို ဘပီဘယ်ရောက်နေမလဲ???? မီးမိးတို့ ငိုနေတာတွေ့ရင် ဘပီကော ဝမ်းနည်းနေမလား??? အတွေးပေါင်းစုံ ဝင်ပြီး ရူးတော့မယ်ဘပီရယ် အပြင်မှာရာသီဥတု သိပ်အေးတယ် ရင်ထဲမှာတော့ အတော်ပူလောင်နေတယ်ေ မကြီးအတွက်တော့ စိတ်ချနော် မီးမီးရှိတယ် သီချင်းလေးအတိုင်းပဲ စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်သာ ချန်ခဲ့ ပါ သိပ်ချစ်တယ် ငါ့ အက်ို ..